Author Topic: Can only happen in Nepal (3.6 lakh pageviews) (Read 431607 times)
« Reply #310 on: February 05, 2010, 05:45:18 AM »
खाइस मुला ! आज पनि धारामा पानी आएन !! - http://www.facebook.com/group.php?gid=271422571729&v
« Reply #311 on: February 07, 2010, 12:22:19 AM »
« Reply #312 on: February 16, 2010, 09:58:33 PM »
भ्यालेन्टाइन गुलाफले धरानमा तनाव
मंगलवार, 16 फेब्रुअरी 2010 13:00 नागरिक
टायर बालेर प्रहरीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै।
रोहित राई, धरान,फागुन ४- आपसी प्रेम अभिव्यक्त गरी विश्वमा मनाइने भ्यालेन्टाइन्स डेले धरानमा भने तनाव गराएको छ। अहिले धरानमा प्रहरी कार्यालयको आसपास तीन जनाभन्दा बढीको समूह आवजावत गर्न बन्देज लगाइएको छ।
विवाद भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन सुरु भएको थियो। फोकल्याण्ड टापु स्थानमा बस्ने १३ वर्षीया आरजु लिम्बुलाई गुलाफको फूल दिन धरान-१७ का १८ वर्षीय जीवन राई र निरज राई उनकै घरमा गएका थिए। त्यस क्रममा घरमा आरजुका दाजु सुमन लिम्बुले जीवन र निरजलाई घरभित्रै कुटपिट गरेको दुवैको आरोप छ।
आइतबार घटनाले उग्ररुप लिएपछि अस्थायी प्रहरी चौकीले निरज र जीवनलाई चौकीमा राखेको थियो। सोमबार चौकीमा विवाद नमिलेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय आउने क्रममा मूलगेट मै रिकभरी धरान सम्बद्ध युवाहरुले केटीका दाजु सुमनलाई हातपात गरेको भन्दै फोन गरेर साथीहरु बोलाएपछि प्रहरी कार्यालय परिसरमै दुई पक्षबीच झडप भएको थियो।
प्रहरीले नियन्त्रण नगरेको भन्दै केटी पक्षका युवाहरुले इप्रकाको प्रशासन शाखाको ढोका तोडफोड गरे। पक्राउ परेका केटी पक्षका विशाल लिम्बुकी आमा पम्फा लिम्बुले प्रहरीले अन्य युवाहरुलाई छाडेर आफ्ना छोराहरुलाई मात्रै नियन्त्रण गरेको आरोप लगाइन्। "मेरा छोराहरुलाई थुनामा राखेको छ, तर गोकुललाई खुल्ला छाडेको छ"-उनले भनिन्।
सोमबार राति प्रहरी र रिकभरिङ युवाहरुका बीच झडप भएपछि धरान झन् तनावग्रस्त बन्यो।
स्थानीय युवाहरुबीच इलाका प्रहरी कार्यालय परिसरभित्रै झडप भएपछि पक्राउ परेका रिकभरि नेपालका पुर्वाञ्चल संयोजक गोकुल राईलाई रिहाइ गर्न माग गदै सोमबार राति स्थानीय युवाहरुले प्रहरी कार्यालय घेराउ गरे। उनीहरुले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जाने बाटोमा टायर बालेर प्रहरीविरुद्ध नाराबाजी गदै यातायात अवरुद्ध समेत पारे।
सयौँका संख्यामा भेला भएका युवाहरुले झगडा मिलाउन आएका संयोजक राईलाई नै पक्राउ गरेको भन्दै नाराबाजी समेत गरे। इलाका प्रहरी कार्यालयको मूलगेटमै पुगेर युवाहरुले चर्का नाराबाजी गर्न थालेपछि अञ्चल प्रहरी गुल्मबाट एक ट्रक प्रहरी झिकाइएको थियो।
« Reply #313 on: February 17, 2010, 12:23:40 PM »
मकवानपुरको चिसापानीगढी नजिक बाटोमा लालिगुराँस बेच्न बसेका बालक। तस्बिर : उपेन्द्र लामिछाने
मकवानपुरको एक गाउँमा मल बारीमा पुर्‍याउँदै तामाङ आमा-छोरी। तस्बिर : उपेन्द्र लामिछाने
« Reply #314 on: February 18, 2010, 04:15:57 AM »
जनसङ्ख्या मन्त्रीकै ९ सन्तान !
बुधवार, 17 फेब्रुअरी 2010
छोरीलाई दाइजो दिनुपरेको भए जोगी हुन्थें-
काठमाडौं, फागुन ५- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री खड्गबहादुर बस्यालले छोराको आशमा आफू नौ सन्तान जन्माउन बाध्य भएको बताएका छन्। धेरै सन्तान भएर राम्रोसँग जीवनयापन गर्नसमेत समस्या परेको तथा राज्य मन्त्री भएपछि भने जीविका चलाउन सजिलो भएको पनि उनले बताए।
आधारभूत प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा शान्ति समाजले बुधबार आयोजना गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी गोष्ठीमा उनले छोराको आशमा आठ छोरी जन्मिएपछि अन्तिममा छोरा जन्माएको र त्यसपछि सन्तान जन्माउन बन्द गरेको बताए।
उनले अगाडि भने- छोरीहरूलाई दाइजो दिनुपरेको भए त म जोगी हुन्थें।
तर पनि कार्यक्रममा उनले थोरै सन्तान जन्माउन तथा दुई वर्षको अन्तरमा अर्को सन्त्तान जन्माउन सबैलाई आग्रह गर्दै यस्ता चेनतामूलक कार्यक्रम नेपालका दूरदराज गाउँमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
« Reply #315 on: February 18, 2010, 07:27:05 AM »
XYZ G timro account inactivate bhancha ta photobucket ko,hera ta 1st page ma!!
« Reply #316 on: February 20, 2010, 10:41:46 AM »
शनिवार, 20 फेब्रुअरी 2010
'भट्टाको दुई चुह्लोवरपर रगत लत्पत्तिएको, फूल, नरिबलको खपटा, अगरबत्ती भेटिएको थियो,' लास फेला परेको भोलिपल्टै घटनास्थल पुगेका सञ्चारकर्मी दिनेशले भने, 'पर्सिपल्ट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल सहितका अधिकारकर्मी त्यहाँ पुगेर अवलोकन गरेका थिए।'
मनिषाको परिवारका अनुसार उनी १८ गते साँझ घर नआएपछि उनका बाबु राजु र केही गाउँले मिलेर खोजी गरेका थिए। कामदारबाट केही खाजा पाउने आसमा मनिषा इँट्टाभट्टामा जाने गर्थिन्।
यता, इँट्टाभट्टामा भेटिएको रगत मनिषाको हो/होइन भनेर डिएनए परीक्षणका लागि राजधानी ल्याइएको रुपन्देहीका प्रजिअ नगेन्द्र झा बताउँछन्। 'प्रयोगशालाबाट नतिजा आएपछि मात्र यो कुराको टुंगो लाग्नेछ,' प्रजिअ झाले टेलिफोनमा भने, 'अदालतले निर्क्यौल नगरेसम्म बलि हो भन्न सकिँदैन।'
तर काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका सहायक वैज्ञानिक अधिकृत निराजन थापाले भने बिहीबार साँझसम्म यस्तो कुनै केस नआएको बताए। रुपन्देहीका प्रहरी उपरिक्षक छविलाल बन्जाडेले भने डिएनएका लागि नभई मान्छेको रगत हो कि हैन भनेर सामान्य परीक्षण गर्न राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान, महाराजगन्ज पठाइएको जानकारी दिए।
मृत फेला परेकी बालिका मनिषा हरिजनको हत्यामा संलग्न आरोपित स्थानीय वीरेन्द्र जैसवाल र नेवास पाललाई माघ दोस्रो साता जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको छ। जैसवालसँगै पक्राउ परेका इन्द्रबहादुर चमार, सुकइ यादवलाई जनही ८ र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर तारेखमा रिहा गरिएको छ। शंकास्पद ठानिएका अन्य दुई जना सोधपुछपछि छुटेका छन्।
सञ्चारकर्मी दिनेशले भने, 'मनिषा मारिएको अवस्थामा भेटिएपछि गाउँलेहरू प्रहरी कार्यालय घेर्न पुगेका थिए।' सत्यतथ्य बुझेर मात्र केस दर्ता गरिने भन्दै प्रहरीले सुरुमा दर्ता गराउन नमानेको दिनेश बताउँछन्। 'स्थानीय प्रहरीले नमानेपछि जिल्ला प्रशासनमा आएर दबाब दियौं,' घटनास्थल अवलोकन गरी फर्केकी रुपन्देहीकी अधिकारकर्मी किरण पन्थीले भनिन्, 'अनि मात्र मुद्दा दर्ता गराउने आश्वासन प्रजिअले दिएका थिए।'
घटनाबारे समाचार प्रसारण, प्रकाशन गरेको भन्दै आरोपीका तर्फबाट स्थानीय सञ्चार माध्यमका पत्रकारलाई धम्की आउने गरेको एक सञ्चारकर्मीले बताए। प्रारम्भिक प्रकृति हेर्दा बालिकालाई बलि दिइएको हुन सक्ने स्थानीय प्रहरी नरहरि अधिकारीले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले उल्लेख गरेको छ।
एसियन ह्युमन राइट्स कमिसनले पनि घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सत्यतथ्य बुझ्नका लागि प्रेस वक्तव्य जारी गरिसकेको छ। आरोपीका परिवारले भने उच्च रकमको प्रलोभन दिएर मनिषाको परिवारलाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीयले नागरिकलाई बताए।
« Reply #317 on: February 20, 2010, 10:42:43 AM »
बर्दियामा परिवार नियोजन संघले कण्डमसम्बन्धी जनचेतना जगाउन प्रशिक्षितहरुले खोलेको सिलाइ पसलको नामै राखिएको छ- कण्डम टेलर्स। तस्बिरः दीपक दाहाल
« Reply #318 on: February 24, 2010, 09:59:23 AM »
परीक्षाअघि नै प्रश्नपत्र बजारमा
24/02/2010 03:27:00 रामनारायण विश्वास
५० देखि पाँच सय रूपैयाँसम्ममा बिक्री
सप्तरी, ११ फागुन
सप्तरीमा सञ्चालित कक्षा आठको जिल्लास्तरीय बोर्डपरीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षाअघि नै आउट भएको छ　। प्रश्नपत्र आउट भएपछि मंगलबार हुने पूर्वव्यावसायिक विषयअन्तर्गतका लेखा, स्वास्थ्य र पि्रभोकेसनल विषयका परीक्षा स्थगित गरिएको छ　।
परीक्षा सुरु भएकै दिनदेखि प्रश्नपत्र आउट भइरहे पनि सोमबार साँझ राजविराज बजारमा छ्याप्पछ्याप्ती प्रश्नपत्रको बिक्रीवितरण भएको पाइएपछि परीक्षा स्थगित गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ　।
मंगलबार हुने पि्रभोकेसनल र स्वास्थ्यशिक्षाका प्रश्नपत्र बजारका मुख्य फोटोकपी सेन्टरमा सोमबार राति फेला परेपछि मंगलबार बिहान बसेको परीक्षा समितिको बैठकले परीक्षा स्थगित गरेको समितिका सदस्य रमाकान्त यादवले नयाँ पत्रिकालाई बताए　। स्थगित गरिएको परीक्षा आउँदो १३ फागुनमा अर्काे प्रश्नपत्र तयार गरेर लिइने यादवले बताए　।
कक्षा आठको प्रश्नपत्र बजारमा ५० रुपैयाँदेखि पाँच सयसम्म बिक्री भएको राजविराजस्थित पबी मावि कक्षा नौमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले बताए　। उनका अनुसार केही विद्यार्थीले नै प्रश्नपत्र आउट गरेर परीक्षार्थीसँग रकम असुल गरेका छन्　।
निमित्त शिक्षा अधिकारी रामदेव चौधरीले प्रश्नपत्र आउट भएको सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको र दोषीलाई कारबाही गरिने बताए　। प्रश्नपत्र जिल्लाबाहिर छपाइ गराएको बताउँदै उनले स्रोत-केन्द्रहरूलाई पहिला नै उपलब्ध गराइएकाले केन्द्रबाट नै आउट भएको हुनसक्ने आशंका गरे　।
नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष भवेन्द्र यादवले सम्बन्धित निकायकै लापरबाही कारण प्रश्नपत्र आउट भएको बताए　। उनले भने, 'यस्ता व्यक्तिलाई शिक्षा कार्यालयमातहत रहेको परीक्षा समितिले कारबाही गर्नुपर्छ　।'
« Reply #319 on: February 24, 2010, 10:02:44 AM »
आधा कामपछि शिलान्यास
काठमाडौ, फाल्गुन १२ - जलविद्युत आयोजनाहरू किन महँगा हुन्छन् ? जवाफ हुन सक्छ, निर्माण अवधि लम्ब्याउने, लागत दोब्बर पार्ने, भेरियसन आदि । वास्तवमा, आयोजना भन्नेबित्तिकै 'लुटको धन फुपूको श्राद्ध' शैलीमा खर्च गर्ने तरिकाले पनि महँगो पर्न गएका हुन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, चमेलिया । कोरियन सरकारसँग चर्काे ब्याजमा ऋण लिएर निर्माणाधीन चमेलिया (३० मेगावाट) आयोजनाले आधा काम सकिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट 'शिलान्यास' गराउने तयारी गरेको
छ । प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीसहित एक दर्जनलाई हेलिकप्टरबाट ओसारपसार गरी लाखौं खर्चेर आउँदो आइतबार शिलान्यास गराइने भएको हो ।
अनावश्यक र अत्यधिक विलासी गाडी झिकाएर प्रधानमन्त्री, जलस्रोतमन्त्री, जलस्रोत (हाल ऊर्जा) सचिवलाई रिझाएका कारण चमेलिया आलोचित छ । यसले डेढ करोड रुपैयाँ पर्ने झन्डै एक दर्जन चिल्ला गाडी झिकाएर नेता र प्रभावशाली अधिकारीलाई जथाभावी बाँडेको छ । आयोजनाका केही अधिकारीले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई 'रिझाउन' शिलान्यास गराउन लागेको स्रोतले जानकारी दियो ।
आयोजनाले प्रतिघन्टा पाँच लाखमा नेपाली सेनाको सुपर पुमा हेलिकप्टर भाडामा लिने भएको छ । स्रोतका अनुसार हेलिकप्टरलाई २८ लाख तथा शिलान्यास स्थलमा तामझाम र भोजभत्तेरका लागि थप १० लाख छुट्टयाइएको छ । आयोजना दार्चुलाको शिखर गाविस ४ स्थित बलाँचमा पर्छ । नेपाली परम्परा तथा संस्कृतिमा निर्माणअघि जगमा ढुंगा राख्नुलाई शिलान्यास भनिन्छ । आधा काम सकिएपछि हुन लागेको यो शिलान्यासप्रति प्राधिकरणका अधिकांश कर्मचारी रुष्ट छन् ।
आयोजना प्रमुख केशवराज भट्ट स्वयं समग्र निर्माण कार्य ४०-५० प्रतिशत सकिएको स्वीकार गर्छन् । किन शिलान्यास गराउनुपर्‍यो त ? उनी भन्छन्, 'यसलाई -शिलान्यास) आयोजनाकै अंगको रूपमा लिइन्छ ।' उनका अनुसार विद्युतगृह खन्ने काम ९० प्रतिशत पूरा भयो, बाँधस्थलको पनि आखिरी अवस्थामा पुगिसकेको छ । उनको तर्क छ, 'शिलान्यास गराउँदा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीबाट आयोजनाको निरीक्षण तथा अनुगमन हुँदा काममा प्रोत्साहन मिल्नेछ ।' आयोजनामा साढे चार करोड अमेरिकी डलर कोरियन एक्जिम बैंकको ऋण छ । करिब सात अर्ब खर्च पर्ने आयोजनाको बाँकी लागत सरकारको छ । आयोजना प्रमुख भट्टले हेलिकप्टरको भाडा प्रतिघन्टा तीन लाख रुपैयाँ हुने दाबी गरे । काठमाडौंबाट चमेलिया पुग्न हेलिकप्टरलाई करिब तीन घन्टा लाग्छ । 'जान आउन गरेर चार/पाँच घन्टा लाग्ने सेनाले हामीलाई जानकारी गराएको छ,' भट्टले भने, 'यो सबैभन्दा न्यूनतम खर्चमा उपलब्ध सुरक्षित हेलिकप्टर हो ।'
आयोजनास्थल पुग्दैनन् कर्मचारी
आयोजना प्रमुख भट्टलगायत अधिकांश कर्मचारी काठमाडौंमै बसेर तलबभत्ता खान्छन् । सम्पर्क कार्यालय अत्तरियामा हाजिर गरेको देखाएर ३५० प्रतिशत 'हार्डसिप भत्ता' र ८/९ हजार स्थानीय भत्ता लिँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार चमेलियामै पुगेको देखाउन उनीहरूले अत्तरियाबाट हाजिर कापी मगाएर महिनाको एकैपटक हाजिर गर्ने गरेका छन् । करिब ८० कर्मचारी रहेको चमेलियामा अधिकृतदेखि सहायक स्तरसम्मका हार्डसिप भत्ता पाउँदै आएका छन् । आयोजना प्रमुख भट्टले भने, 'तपाईं किन नगएको भनेर कसैले भनेको छैन, जानेआउने गरिरहेको छु ।' हार्डसिप भत्ता, सवारी र इन्धन दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न खोजेबापत आयोजना प्रशासन प्रमुख हुमबहादुर केसीलाई नौ महिनामै केन्द्रीय कार्यालय सरुवा गरिएको छ ।